Archive du 20180323
Tiko AAA Mpiasa 702 nalefa “chômage technique”
Tsy namelan`ny fanjakana raha tsy rava tanteraka ny orinasa Tiko AAA. Vokatry ny fahirano nataony dia voatery nanao fiatoana ara-teknika ity orinasa ity. Manomboka androany alakamisy 22 martsa 2018(ndlr:omaly) dia manao fanambarana ofisialy izahay mpisolovava an`ny orinasa AAA fa tsy maintsy hizotra any amin`ny fiatoana teknika ny orinasa, hoy Ratefimahefamijoro Dimin`Eloi.
Nanao fivoriambe voalohany teny amin’ny Toit de Tana Hotely Carlton Anosy omaly hariva ireo mpanao politika sy mivondro ao anatin’ny vovonana manohana ny filoha Hery Rajaonarimampianina.Nitarika ny fivoriana ny filohan’ny antenimieran-doholona sady filoha nasionalin’ny HVM Rivo Rakotovao,
Malety feno vola, kitapo misy dràla Hividianana safidy, hanjonoana ireo adala Dia mahavidy tokoa ve ny fahoriana mianjady ? Ndrao lahy diso paika, hivarina any an-kady
SECES Sampana Antananarivo “Hampisy krizy ny firosoana amin’ny fifidianana”
Raha izao no mitohy dia manahy mafy ny SECES (Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy Mpikaroka-Mpampianatra) Sampana Antananarivo fa tsy hitondra filaminana ho an’i Madagasikara velively sady vao mainka hampihitsoka tanteraka ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto ny firosoana amin’ny fifidianana fehezin’ny Lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana tsy nifaneken’ny rehetra, araka ny fanambarana navoakan’izy ireo omaly taorian’ny fivoriambe notanterahana teny Ankatso.
Aretina Naoma Tafakatra 90.000 isan-taona ireo ankizy mamoy ny ainy
Aretina iray anisan’ny mamono ankizy latsaky ny dimy taona 80.000 ka hatramin’ny 90.000 isan-taona ny aretina Naoma, raha araka ny tarehimarika navoakan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana.
Toekarena sy fampandrosoana Potika tanteraka i Madagasikara
700 tapitrisa dolara na 2 234 428 000 000 Ariary ny vokatra an-dranomasina, 50 tapitrisa dolara na 159 602 000 000 Ariary ny volamena sy ny vato sarobidy aondrana isan-taona, 1 miliara dolara na 3 192 040 000 000 Ariary (1dolara=3192, 04Ar) ny trafikana andramena efa vita. Mampametra-panontaniana ihany, hoy i Serge Zafimahova hoe ahoana ny nivoahan’ireo kanefa nosy i Madagasikara ary roa ihany ny lalana : na mitaingina sambo na fiaramanidina.
ASIA ENJOY Madagascar Hanampy ireo mpandraharaha amin’ny fitadiavana lalam-barotra
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly teny amin’ny Parc des expositions Forello Tanjombato haharitra efatra andro ilay hetsika “Salon Asia Enjoy Madagascar” karakarain’ny agence de communication la premiere ligne.
Efa tonga soa aman-tsara ao Ambilobe amin’izao fotoana izao ireo fitaovana ilaina ho amin’ny fanarenana ny lalana mampitohy ity distrika ity amin’Ambanja any amin’iny lalam-pirenena faha 6 iny. Araka ny fanazavana nomen’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny asa vaventy hatrany dia tokony azo ampiasaina ao anaty fotoana fohy izany.
Nicolas Sarkozy Mety higadra 10 taona
Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny fitsarana amin’Atoa Nicolas Sarkozy. Kolikoly, fandraisana sy fanodinkodinana ny volan’ny vahoaka Libianina no vesatra hanenjehana azy.